Ọrụ CNC Machining, Akụkụ Nhazi CNC, Akụkụ Metal CNC - BXD
CNC na -atụgharị
5 Axis CNC igwe
Akụkụ ntụgharị CNC
Akụkụ CNC Plastic
Akụkụ 5 Axis CNC
Ọrụ igwe CNC (3-, 4- & 5-Axis) maka akụkụ nkenke dị elu na-emepụta obere olu.
Ọrụ anyị igwe CNC igwe nwere ike ịnye akụkụ nkenke maka ọrụ gị.
Oghere CNC lathes anyị na ebe ntụgharị anyị ga -enye gị ohere imepụta akụkụ mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya.
Ọrụ gụnyere ịkpụ laser, ịkụ ọkpọ, ịgba ihu, ịpị rivet na ịgbado ọkụ, wdg.
Omenala mpempe akwụkwọ Metal Power Box mgbodo na Gold ...
Aluminom Alloy 6061 CNC Metal Parts For Camera ...
Aluminium Alloy 6061 CNC Na -atụgharị akụkụ maka Lithi ...
Akụkụ CNC nke Igbe Galvanometer maka UV ...
Otu BXD si arụ ọrụ
Bulite eserese gị
N'ime afọ 10 nke ahụmịhe
BXD kemgbe afọ 2010, ndị injinia anyị na -enye ọrụ igwe CNC ihe karịrị afọ 10 ma wulite ahụmịhe bara ụba site na ọtụtụ ọrụ gara aga, anyị nwere ike ijikwa akụkụ dị mgbagwoju anya na nkenke na -enweghị nsogbu.
Nzaghachi ngwa ngwa, nnyefe oge
Ná nkezi, anyị na-eweghachi nhota n'ime awa 24, akụkụ ụgbọ mmiri n'ime ụbọchị 7 ma ọ bụ ihe na-erughị, anyị nwere nnyefe oge 99% na ọnụego ogo.
Ngwa zuru ezu, otu nkwụsị nkwụsị
BXD nwere akụrụngwa zuru oke maka imepụta na nnwale. Anyị ga-enye gị ọrụ nhazi otu nkwụsị site na akụrụngwa iji rụchaa ngwaahịa.
ISO9001: 2005 asambodo
Anyị factory bụ ISO9001: 2005 gbaara emeputa nke elu àgwà ngwaahịa
Anyị na -agbaso usoro siri ike maka akụkụ gị na -ezute ụkpụrụ kacha mma mgbe niile.
Anyị na -ahụ na echedo IP gị
akụkụ omenala ugbu a
Biko hapụ anyị, anyị ga -akpọtụrụ n'ime 24hours
Ọnwa Asaa 14, 2021
5 Axis Machining maka akụkụ dị mgbagwoju anya
Kedu ihe bụ CNC 5 Axis machining na kedu uru ọ bara? N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ejirila CNC machining axis ise mee ihe n'ọtụtụ ebe. Na ngwa bara uru, mgbe ndị mmadụ na-ezute arụmọrụ dị elu na nhazi dị elu nke ihe mgbagwoju anya pụrụ iche ...
Nkwenye dị mma nke BXD
Ogo bụ nkwa siri ike maka mmepe nke ụlọ ọrụ, o doro anya na nhazi mmepụta bụ isi maka ịdị mma ngwaahịa, nyocha bụ nkwa maka ngwaahịa. BXD esorola SOP maka usoro mmepụta. Ngwa anyị kwụsiri ike na nke ruru eru ...
Chọta onye nrụpụta igwe CNC na China
Chọta onye nrụpụta igwe CNC na China BXD bụ ụlọ ọrụ nrụpụta CNC ọkachamara afọ 11 na Shenzhen China, anyị na-enye ọrụ na China ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 11 na anyị nwekwara ụfọdụ ndị ahịa na USA, Singapore, Malaysia, UK wdg n'ofe dịgasị iche iche. ụlọ ọrụ. Anyị na-atụ anya...
Ndị anyị na ha na -arụkọ ọrụ
BXD nwere ahụmịhe karịrị afọ 10 na nrụpụta akụkụ akụkụ CNC omenala, anyị kpebisiri ike ịnye gị ọrụ igwe CNC kacha mma.
Ọrụ ọrụ igwe CNC
CNC egwe ọka
F1, Owuwu A, Mpaghara Zhongyuan, Dalang Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Ekwentị:+86 177 2781 0685